Vagadziri veEuropean Standard Vagadziri - China European Standard Factory & Suppliers
European standard switch uye masokisi. Hwemhando yepamusoro uye neEC, TUV, NF certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi ndiro yemateki ino yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvinhu uye zinc simbi. Iyi yakakwirira-giredhi rondedzero inogona kusangana nezvose zvaunoda. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro che yakanaka magetsi conductor uye las ...
European Nova (Plastiki)
European standard switch uye masokisi. Hwemhando yepamusoro uye neEC, TUV, NF certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi ndiro yemateki iyi yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvigadzirwa uye girazi rakatsamwa. Modular chimiro, DIY, nyore kukwana. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket yakagadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conductor uye nekusingaperi elasticit ...
European standard switch uye masokisi. Hwemhando yepamusoro uye neEC, TUV, NF certification, waranti ndeye makore gumi Iyo yekumberi ndiro yemateki iyi yakagadzirwa neyepamusoro giredhi yekuchengetedza nharaunda PC zvigadzirwa uye girazi rakatsamwa. Chimiro chakagadzirwa nesimbi. Iwo switch switch anogadzirwa nemhando yepamusoro yesilver alloy zvinhu. Izvo-on mashandiro anopfuura 40000 times. Iyo clip ye socket inogadzirwa ne phosphor bronze, iyo ine chimiro chemagetsi yakanaka conductor uye nekusingaperi elasticity. The plu ...